Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu, Elliptical Cross Trainer, Exercise Bike- Bestgym
Onye nkuzi Elliptical Cross
X-Bike a na-atụgharị anya
Igwe Igwe Igwe Magnetik
Reumbent Mgbatị Bike
Ngwaọrụ Ọzụzụ Rower
Ininggba ígwè Bike
A na-eji igwe mgbatị emega ahụ maka mmega ahụ, na-eme ka ahụike zuru oke, maka ọnwụ nha, na maka ọzụzụ maka ihe omume okirikiri. A na-eji igwe mmega ahụ eme ihe ogologo oge maka ọgwụgwọ anụ ahụ n'ihi mmetụta dị ala, nchekwa, na arụmọrụ dị mma ọ na-enye.
Igwe elliptical na-eji ụkpụrụ bụ na mgbe ahụ mmadụ na-ejegharị nwayọ, briskly, ma ọ bụ na-agba ọsọ, usoro mmegharị nke nkwonkwo ụkwụ dị ka ellipse. Site na usoro ụfọdụ, pedal na-agagharị na egwu elliptical, na egwu elliptical nke e guzobere site na pedal na-eduzi ụkwụ onye ọrụ Ihe omumu nke akụrụngwa elliptical na-eme ka ahụ dị mma nke igwe elliptical dabara na usoro okike nke mmadụ. N'ime oge mgbatị ahụ dum, ụkwụ anaghị ahapụ pedal kpamkpam, nke nwere nnukwu mmetụta na nkwonkwo ikpere, ọ nwere ike ịme mgbatị ahụ na akwara ụkwụ n'otu oge ahụ. , A na-ahụta ya dị ka ihe nwute na ngwa mmega ahụ aerobic n'afọ ndị na-adịbeghị anya.
A na-ejikarị ígwè magnetik eme ihe iji nye ụmụ mmadụ ihe ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa nke 1653 nke na-anaghị egbochi oke ahụ nke na-eguzogide ọgwụ dao, nwere ọnụ ọgụgụ dị nro nke 4102, dị mfe ma dịkwa mma, na enweghị ume na mmetọ ike. Ọ gụnyere nzukọ ịnyịnya ígwè na usoro ịkwọ ụgbọala. Mgbe ị na-anya ụgbọala, naanị ndị mmadụ kwesịrị ịkwọ ụkwụ ụkwụ aka ekpe na aka nri n'ihu. Isi magnetik na flywheel na-eme ka magnetik nke abụọ gbanwee site na magnetik. Mgbe aka ekpe na aka nri na-acha ọsọ ọsọ, ha na-edozi ya na magnetik nke abụọ Igwe na-aga n'ihu na isi na-agba ọsọ ọsọ ọsọ. Mgbe pedal ahụ kwụsịrị, n'okpuru ọrụ nke ike ndọta, igwe kwụ otu ebe nwere ike na-akpagharị ogologo oge.
Steel ụba Oche Recumbent Mgbatị Bike BGR103
China Factory Price mma recumbent ọdụ e ...
Foldable Home Mgbatị mgbatị Machine Foldin ...
Hot ire kacha mma price azụmahịa mma Nọdụ R ...
Ndị mmekọ niile
Ọnwa Iri 30, 2020
2018 CHINA egwuregwu Gosi Shanghai Sports Fair
EGO EGO 2019CHINA
Ningbo Bestgym Fitness Equipment Co,. Ltd. dị n'ụsọ oké osimiri na okporo ụzọ dị mfe-Fenghua Ningbo, nke na-ekpuchi mita 30000.
Mpaghara Mpaghara Zhangjia, Shangtian Town, Fenghua, Ningbo, China